Ihe edemede Chris Bross na Martech Zone |
Edemede site na Chris Bross
Anyị tinyere nnukwu ozi gbasara etu Google Adwords Adrank si arụ ọrụ. WordStream ewepụtala infographic a iji gosi gị otu Google Adwords si arụ ọrụ, na-enye nghọta maka ọrụ onye ọrụ ọchụchọ na-eduga na mgbasa ozi ahụ. Google Adwords na-akọwa 97% nke Google $ 32.2 ijeri na mgbasa ozi revenue! Site na WordStream - ezigbo onye mmekọ AdWords.
Anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa na-abịakwute anyị mgbe ha tufusịrị ego ha na-akwụ ụgwọ ha kwa ụbọchị (PPC) na nke ha. Ọ bụghị na ha egeghị ntị ma ọ bụ jikwaa akụkọ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ bụ naanị na ha amaghị otu esi emetụta nsonaazụ ha ma melite ha n'ezie. Imirikiti ndị mmadụ kwenyere na ịkwụ ụgwọ site na ịpị bụ naanị ịchụ agha ma ha amadịghị na, site na ịkwalite ogo mgbasa ozi ha, ha nwere ike